Warshadda Lacagta Loolanka
Ku hel qadaadiicda shaqsi ahaaneed qiimo tartan leh qiime aad u sarreeya Lacag kasta oo caqabad ku ah waxay leedahay naqshad u gaar ah oo iska leh ururka ay matalayso, sida laamaha militariga, cutubyada shaqsiyaadka, kooxaha gaarka ah iyo xitaa howlgallada gaarka ah. Xubnaha adeegga waxaa lagu yaqaanaa inay soo saaraan uruurin badan oo qadaadiicda loolanka ah inta ay ku jiraan ciidanka. Waxay dareemaan kibir iyo dareen lahaansho marka ay soo bandhigaan shilimaadkooda kala duwan. Tan iyo 1984, warshadeena waxay bixisay malaayiin qadaadiic caqabad militari leh 100% qanacsanaanta, qadaadiicdayadu waxay wadaagtaa 90% suuqa Yurub iyo USA. Qadaadiicda loolanka ayaa si buuxda loo habeeyay si ay ula jaanqaadaan tilmaamahaaga saxda ah. Wixii dabacsanaanta naqshadeynta runta ah, waxaad dooran kartaa hal ama laba qadaadiic dhinac leh oo leh midab dhinac ama labada dhinac ah. Haddii aad haysato fikrad aad rabto inaad tijaabiso, nala wadaag, waan kula shaqeyneynaa si aan u hubinno in naqshaddaadu tahay wax walba oo aad rabto inay noqoto! Tilmaamaha ● Maaddooyinka: Daawaha zinc, naxaasta, xariirta qaaliga ah Cabbirka guud: 38mm/ 42mm/ 45mm/ 50mm ● Midabyada: ku dayashada dhaldhalaalka adag, dhaldhalaalka jilicsan ama midabbada lahayn Ish Dhammee: dhaldhalaalaan / matte / qadiimiga, laba midab ama saamaynta muraayadda, 3 dhinac oo nadiifinaya Ma jiro xaddid MOQ ● Xidhmada: bacda xumbo, kiishka PVC, sanduuqa maro jilicsan, sanduuqa warqadda, istaagga lacagta, lucite gundhig
Qadaadiicdii Daabacidda Zinc -ka
Ku dhinta Qadaadiicda Naxaasta ah
Qadaadiicda Saamaynta Muraayadda ama Qadaadiicda Caddaynta Dahabka ah
Qadaadiicda Tartanka Dhaldhalaalka ee Daran